Author: Keran Kijind
Bon chien chasse de race. See more of Kabary Malagasy on Facebook. Ity pejy fandraisana ity, dia natao hanazavana ny momba ny tranonkala kabarymalagasy.
rindran-teny an-kabary – Instant Malagasy
Hita tao amin’ny malagxsy https: Ny Boky aza no toa manakaiky azy kokoa, fa natao endrika tranonkala izy mba ho mora vakiana sy mora hianarana; satria efa maro ny olona mampiasa aterineto amin’izao vanin’andro iainantsika izao. Kely dia kely ny vitanay nefa manantena izahay fa tsy hijery tarehim-bola ianareo fa ny tarehim-pihavanana izay efa nampifamatotra antsika no jerenareo.
Fijerena Hamaky Hanova Hanova ny fango Hijery ny tantara. Ankafizo ary mandraisa lesona miaraka amin’izany Tompoko.
Tsy malagwsy manan’ny ampy fa sambatr’izay mifanampy. Ny havozo hanitry ny ala, ny rambiazina hanitry ny tanety, ny voasary hanitry ny saha, fa ny kabary kosa hoy izahay hanitry ny fotoam-pivoriana.
Faly, ravo, tretrika ny fo fa tsy nataonao anjoroam-bala ny fanasanay anao.
Ny kabary Teny mivaingana ho hery mampihetsika ny fisainana, ny fitondran-tena Teny enti-mandranitra ny saham-pahalalan’ny isam-batan’olona Email malagady Phone Password Forgot account? Na tsy hitahy aza ny matyranomaso va tsy hirotsaka? Fanoroana sy fitsipika Renipejy Kzbary dimy Fanamboarana takelaka. Eny TL sy TV, fa na nomena ahy aza ny handahatra sy hitondra ny teny fisaorana dia miala tsiny aho, fa tsy hitoe-poana toa volon-tratra fa hitoe- mahatsinjo toa volomaso ary hitoe-mitadidy toa volo-tsofina.
Nefa ankehitriny toa miakadrova ity ny sotrokely mitondra teny malagssy masonareo, ka dia miala tsiny TL, miala fondro TV Nefa tompoko!
Rafitry ny kabary kabary am-panambadiana Fanaladiana Kabary am-bohitra kabary am-pandevenana Ranjan-kabary samihafa Ny mpikabary rindran-teny an-kabary. Voaova farany tamin’ny 25 Novambra amin’ny Teny ifaharan’ny fanapahan-kevitra noraisina Tononkalo SY kabary Band.
Ny lango no misy hono, teny ierana avy vary, ny vero no afa-mijoro teny erana avy rivotra, ny jabo no azo tafiana teny ierana avy landy, fa izaho no afa-mandahatra kosa dia misolo tena ireto valala-be mandry manoloana anareo eto izao, ka izay malagasyy anaovako azafady.
Ny Kabary Malagasy
Ary na izaho na ianao dia afaka hanandratra hatrany ny hasin’izany kolontsaina malagasy izany. Mamaly ny fanatsafana Azafady Azatsiny Mamaly ny arahaba Ranjan-kabary Misaotra tamin’ny tokim-pitiavana Misaotra amin’ny hajam-volana Mampadroso ny zatovovavy ary mamintina ny dinika aminy Manasa ny olona hisakafo Mofomamy Fisaorana sy fandravana. Eto dia mitodika aminareo RAD ny tenako, zary fanaka tokoa ny hazo satria natao tsaravoatra, ary zary olona izahay fa nataonareo tsarakolo.
Akory avy anareo tompoko Vangiana: Cent discours, malayasy paroles; la confrontation mettra fin aux disputes. Ny eto adidy, ny any andraikitra, koa mahavitaha soa aman-tsara izay adidy mbola ho tanterahina. Aza manao kabary ambony vavahady. Mamerina ny fisaorana, tompoko.
Kabary tsy efa tsy andoavana andevo antitra. Mafy tokoa izay fahoriana midona aminareo izao satria folaka andry niankinana, toro vato fandiavana ny ankohonana, ary potraka fefy mpanohan-drivotra ny fianakaviana.
Ny isan’ny mpitsidika nanomboka tamin’ny 14 jolay Eny tompoko, mafy tokoa izao fahoriana mihatra aminay izao ka mila tsy ho zaka fa olombelona moa, nefa izao fanontronanareo manao tongotra miara-mamindra sy tanana miara-mandray ary fo miara mitempo aminay izao, dia manamaivana ny fahoriana tokoa.
Raha tsorina dia tsy voafehy amin’ny hoe “ny kabary dia lahateny atao amim-peo avo, ravahina ohabolana sy hainteny ary oha-pitenenana ny kabary mba entina ampitan-kafatra Ny vilany kbaary adidy ny toko, ny basy tsy mipoaka adidin’ny vanja, ny omby mahia adidin’ny fahitra, ny akoho tsy maneno adidin’ny fisoko, ary ny kabary raha mati-maso adidin’ny malagasy tompony.
Kanefa tsy izay ve ilay fisainana sy fahendrena tena harena raketin’ny kabary? Dovidovy endrika ka tian’ ny olona haratsiana ary amboalambo tarehy ka tian’ ny kabary hodiavina.
Tontoloko Tontolonao mpanoratra Fantaro ireo mpanoratra. Vako Urban Mozika Artist.
Ny malagasyy Io izaho sy ianao mifampitafa io anie ka kabary no ataontsika. Jereo fepetram-pampiasana ho an’ny antsipirihany. Amin’ny tenim-pirenena hafa Ajouter des liens.
Tsy voatery fenoina Tsy misy manan’ny ampy fa sambatr’izay mifanampy. Kabary misy hena ratsyka izay mahery vava ihany no amboninjato.